सुशान्त आ*त्मह*त्या प्रकरण : घरमा खाना बनाउने नेपाली कामदारले दिए यस्तो बयान! - News Bihani
सुशान्त आ*त्मह*त्या प्रकरण : घरमा खाना बनाउने नेपाली कामदारले दिए यस्तो बयान!
बलिउडका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको घरमा तीन वर्ष खाना पकाउने कर्मचारीको रूपमा कार्यरत अशोक खासूले महत्वपूर्ण बयान दिएका छन्। उनले आफू कार्यरत रहँदा सुशान्तले ड्रग्स प्रयोग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीले केही दिनअघि एक भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सुशान्तले नियमित रूपमा ड्रग्स लिने गरेको आरोप लगाएकी थिइन। उनले ड्रग्सको मात्रा कम गर्न आफूले आग्रह गरेको दावी गरेकी थिइन।
रियालाई सुशान्तको आ*त्मह*त्या प्रकरणमा प्रमुख आरोपीको रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कामदार अशोकले भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘म सन् २०१६ देखि २०१९ को अक्टुबरसम्म सुशान्तको घरमा कामदार थिए। यो अवधिमा उनले कहिल्यै ड्रग्स लिएको देखिन। सुशान्त डिप्रेसनमा पनि थिएनन। रियाले सुशान्तमाथि ग’म्भीर आरोप लगाउँदै उनी २०१३ देखि नै डिप्रेसनमा भएको आरोप लगाएकी थिइन्। अशोकले गत अप्रिलमा रिया चक्रवर्ती सुशान्तको घरमा प्रवेश गरेको बताए।
उनले युरोपको भ्रमणबाट फर्किएपछि सुशान्तको स्वास्थ्य बिग्रिएको बताएका छन्। युरोप भ्रमणमा सुशान्त, रिया र रियाका भाई सौविक चक्रवर्ती गएका थिए । युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि रियाले नै आफूलाई जागिरबाट निकालेको अशोकको भनाई छ । अशोकले सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सुशान्तको दिदी मितु र प्रियंका मुम्बईमा भेट्न आउँदा फोनबाट उनी व्यस्त भएको र भेट्न नसक्ने जानकारी दिएको पनि बताए। सुशान्तको फोनबाट प्रियाले यो कुरा भनेको उनको अर्को कामदारले बताएका थिए ।
सुशान्तसँग अर्का एक नेपाली अंकित आचार्य पनि काम गर्थे। उनलाई पनि रियाले कामबाट निकालेका थिए। अंकित सुशान्तको आत्महत्या नभएर हत्या गरिएको दावी पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएका छन्। सुशान्तको निधन १४ जुनमा भएको थियो। मुम्बई प्रहरीले फाँसी लगाएर आत्महत्या गरेको दावी गरेपनि अंकितले उनको कुकुरको बेल्टले घाँटी थिचेर मारिएको बताउँदै आइरहेका छन्।
सोमवार, भाद्र १५ २०७७०६:४५:१२
# bollywood # sushant sing rajput
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने घटनाका मुख्य अभियुक्त सहित ९ जना पक्राउ